Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka oo digniin ka soo saaray dhoofinta Dhuxusha Somalia – Puntland Post
Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka oo digniin ka soo saaray dhoofinta Dhuxusha Somalia
Muqdisho (PP) ─ War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska xeer-ilaaliyaha guud ee dalka ayaa looga hadlay dhoofinta dhuxusha, waxaana lagu xusay in dhoofinta dhuxushu ay saamayn laxaad leh ku leedahay xaalufinta dhirka iyo deegaanka, waxayna il-weyn oo dhaqaale u tahay argagixisada.
Dhoofinta dhuxusha waa fal-dambiyeed lagu ciqaabi karo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana lagu mamnuucay qaraarka golaha ammaanka ee QM ee tirsigiisu ahaa; S/RES/2036 (2012) ee ku saabsan mamnuucidda, dhoofinta iyo soo-dejinta dhuxusha Soomaliyeed si dadban ama si toos ah, xataa haddii aanay dhuxushaasi Soomaaliya toos uga imaanin.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu uga digayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudahiisa ama dibaddiisa dalka, lugtana ku leh dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah inay joojiyaan fal-dambiyeedkaas, waxayna wajahayaan ciqaabta ka dhalata fal-dambiyeedkaas sida ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
Dhanka kale, si arrintaan wax looga qabto xafiiska xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka wuxuu la kaashanaya Booliska Soomaaliyeed guud ahaan iyo ka Dawlad￾Goboleedka Jubaland gaar ahaan.
Ugu dambeyn xafiiska xeer-Ilaaliyaha guud ee Qaranka wuxuu ka digayaa in doomaha iyo maraakiibta lagu raro dhuxusha in lala wareegayo iyadoo loo marayo.
Haddaba, AKHRISO; Qoraalka kasoo baxay xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka;